Laamaha Amaanka Soomaaliya oo baaritaan ka wada Muqdisho & wadada Afgooye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Laamaha Amaanka Soomaaliya oo baaritaan ka wada Muqdisho & wadada Afgooye
A warsame 2 February 2015 2 February 2015
Mareeg.com: Laamaha Amaanka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka baaraya gaadiid laga shakiyey in laga soo buuxiyey walxaha qarxa.
Ciidamada Amaanka ayaa Kontoroolada laga soo galo magaalada waxey ku baarayaan gaadiidka, gaar ahaan wadooyinka Muqdisho kasoo gala dhanka Shabeellaha Hoose.
Sidoo kale, baaritaanka ayaa ka socda gudaha magaalada Muqdisho, waxaana afhayeenka Waraasadda Amaanka Maxamed Yuusuf sheegay iney ku raad joogaan gaadiid lagu soo xiray walxaha qarxa oo magaalada lasoo geliyey ama kusoo socda.
“Ciidamada Amaanka oo helay macluumaad la xiriira qaraxyo la doonayo in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliya ayaa waxey xalay ilaa saaka howlgal ka wadaan laga soo bilaabo Ceelasha Biyaha ilaa Isgoyska Dabka” ayuu yiri Maxamed Yuusuf.
Wuxuu sheegay Maxamed iney jiraan dhowr qof oo loo soo qabtay tuhun la xiriira weerarada Alshabaab qorsheeyeen, islamarkaana ciidamadu sii wadi doonaan howlgallada lagu raadinayo kooxaha qaraxyada wada sida uu yiri.
Ma sheegin afhayeenku wax gaadiid ah oo ilaa hadda la qabtay, hase ahaatee ciidamada ayaa weli ku duga jira howlgalka baaritaanka ah.
Nabadoon C/llaahi Geedi Shadoor oo Nabad Sugiddu ka reebtay diyaarad
Hogaamiyahaasha Koonfurta Sudan oo heshiis nabadeed kala saxiixday